Socod! Wuxuu shaqeeyaa pro
Nooca cusub ee QOMO ee Flow!Works waxa uu leeyahay astaamo badan oo cusub iyo ilo si ay waxbarida uga dhigaan mid fudud, madadaalo badan, iyo dhiirigelin dheeraad ah ardayda iyo macalimiinta.U samee duruus ku dheggan ardayda da' kasta leh iyo dhammaan noocyada waxbarashada adiga oo u oggolaanaya ardaydaada inay eegaan, dhegaystaan, oo taabtaan dhammaan hal mar.
Ka kooban saddex qaybood interface ugu weyn
Menu interface ee furitaanka faylka, kaydinta iyo daabacaadda faylka.Si fudud u soo deji Powerpoint si aad u samayso soo jeedin la falgasha software-ka, iwm.
Toolbar interface qalab kala duwan oo isticmaalaya.Waxaad bedeli kartaa midabka qalinka si aad ugu sharaxdo qorshaha casharka.Dooro agabka aad ku dhaqaajinayso qoraalka oo isticmaal tirtiraha si aad u tirtirto.Si sahal ah u dhaqaaji barta aaladda dhinac kasta oo toosan ama toosanWaxaad u dhaqaajin kartaa aaladda cidhifka sare si aanay carruurta xun u gaadhi karin.
Maareynta slide ee bandhigga PPT.Daar PPT-gaagaKu dar ama yaree bog sida kuugu habboon.
Ku samee xulashooyin ku salaysan qalab qalin oo kala duwan.Ka dooro sawiro kala duwan qalinkaaga gaarka ah oo leh qalab qalin qoraal ah;Isticmaal qalin wax iftiimiya ama qalinka laysarka si aad ugu wacdo faahfaahinta.
Iftiiminta qulqulka!Wuxuu shaqeeyaa pro software
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee software-ku waa sida hoose
Socodka!Software-ka Works pro wuxuu leeyahay kumanaan agab waxbarid ah.Dhanka kale, waxaad ku dari kartaa kheyraadkaaga sida sawirka / maqalka / fiidiyowga ee software-ka oo aad u badbaadiso kheyraad shakhsi ahaaneed.
Qalab qani ah oo ku jira software-ka waxbarashada oo waxaad sidoo kale habayn kartaa qalabka wax lagu qoro.
Software lagu dhisay browserka
Flow!Works Pro waxa ay bixisaa biraawsar shabakad ku dhex dhisan.
Walxaha ku yaal mareegaha waxaa lagu dhejin karaa sabuuradda sawirka si loogu isticmaalo bandhigga.Inta aad raadinayso mareegaha, adiga
wuxuu dooran karaa shayga la rabo (sawirrada ama qoraalka) oo ku jiidi kara sabuuradda sawirka.Tani waxay caawimo weyn u tahay ardayda inay si fudud u ogaadaan casharrada.
Isticmaal kamarad dukumeenti ahaan
Flow!Works Pro waxa ay awood kuu siinaysaa inaad ku xidho kamarada dibadda si aad u muujiso sawirka muuqda oo aad uga warbixiso sawirka tooska ah.
Xiga: QPC20F1 USB dukumeenti kamarad
Flow!Works Pro buug-yaraha